जब स्तन नै काटेर फाल्नुपर्यो . . .! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
जब स्तन नै काटेर फाल्नुपर्यो . . .!
काठमाडौँ, २६ फागुन, सीतापाइलाकी रेजीना मुल्मी केसीलाई ११ वर्ष पहिले देब्रे स्तनमा क्यान्सर भयो । उपचारका लागि उनी धेरै अस्पताल धाइन् । केही सिप नचलेपछि उनले स्तन काटेरै उपचार गराउनु पर्यो । उनी भन्छिन्, “ सबैजसो अस्पताल धाएँ, सबै डाक्टरलाई भेटे तर केही लागेन । अनि स्तन काटेरै फाल्नुपर्यो ।”
स्तन काटिएपछि उनले शारीरिक रुपमा अपुरो महसुस गर्न थालिन् । साथै उनकाे आत्मविश्वास पनि विस्तारै गुम्न थाल्याे । “स्तन हुनु र नहुनु धेरै फरक पर्दौ रहेछ”, मुल्मीले भनिन् “स्तन नहुँदा मैले आत्मविश्वास गुमाएको थिए, ती कुराहरु म शब्दमा बयान गर्नै सक्दिन ।” तर अहिले उनी सहज महसुस गर्दैछिन् । किनभने उनले स्तन प्रत्याराेपण गराएकी छिन् । उनी भन्छिन्, ” स्तन प्रत्याराेपण गराएपछि गुमेकाे आत्मविश्वास फर्केर आयाे ।”
उमेरसँगै यसको स्तन क्यान्सरकाे जोखिम पनि बढ्दै जाने चिकित्सक बताउँछन् । समयमै उपचार नपाउँदा कतिपयले त स्तन काटेरै फाल्नुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका छन् । तर अब स्तन प्रत्यारोपण सुविधा मुलुकमै उपलब्ध छ । यसले रोगीलाई पूर्ववत् जीवनयापन गर्न मद्दत गरेको छ । नयाँ प्रविधि भित्रिएसँगै क्यान्सरको उपचारपछि स्तन प्रत्यारोपण गर्न सकिने भएको छ । राजधानीकै नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा सेवा उपलब्ध भइसकेकाे छ । क्यान्सरबाट मुक्त भएपछि आफ्नै शरीरका अन्य तन्तु राखेर स्तन प्रत्यारोपण गर्न सकिने क्यान्सर सर्जन डा. कपेन्द्र अमात्यले बताए ।
क्यान्सरबाट मुक्त भइसकेपछि गरिएको स्तन प्रत्यारोपणले महिलाको सुन्दरता र आत्मबल कायम गर्ने उनले बताए । तर मधुमेह भएका तथा धुम्रपान गर्ने महिलालाई स्तन प्रत्यारोपण नगर्न अमात्यको सुझाव छ । “हामी सकभर स्तन बचाएरै उपचार गर्ने कोशिस गर्छौ“, डा. अमात्यले भने, “यदी बचाउन सकिएन भने स्तन काटेर उपचार गरिसकेपछि मात्र प्रत्यारोपण गर्छौ“ ।
स्तन प्रत्यारोपण आफ्नै शरीरको विशेष गरी पेट र ढाडको मासु काटेर गर्न सकिन्छ । दैनिकजसो १५/२० जना महिला स्तनसम्बन्धी समस्या लिएर अस्पताल पुग्ने गरेकाे नेपाल क्यान्सर अस्पतालकाे तथ्यांक छ । त्यसमध्ये करिब १० प्रतिशतमा स्तन क्यान्सरको लक्षण भेटिने गरेको डा. अमात्यले बताए । स्तन प्रत्यारोपणले उनीहरुको जीवन सहज रुपमा जीउन सक्ने भएकाले अन्य बिरामीलाई पनि स्तन प्रत्यारोपणका लागि परामर्श गरिरहेको अमात्यको भनाई छ ।
सामान्यता स्तनमा गाँठागुठी आउनु, स्तनको टुप्पो रातो हुनु वा त्यसबाट पिप जस्तो पदार्थ बग्नु, स्तन सुन्निनु तथा दुख्नु लगायत स्तन क्यान्सरका लक्षण हुन् । बदलिदो जीवनशैली, अस्वस्थकर जीवनयापन, धुमपान–मध्यपानको सेवन, बच्चा नजन्माउनु, धेरै उमेरमा बच्चा जन्माउनु, स्तनपान नगराउनु जस्ता कारणले पनि स्तन क्यान्सरको प्रकोप तीव्र रुपमा बढिरहेको चिकित्सकको भनाई छ ।
महिलाले समयमै सचेत भइ आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गरे स्तन क्यान्सरको निदान गर्न सकिन्छ । घरमै बसेर पनि नियमित रुपमा स्तन परीक्षण गर्न सकिन्छ । महिनावारी भएको समयमा भन्दा अरु बेला स्तन दुखे वा गाँठागुठी भेटिए तुरुन्त अस्पताल जान चिकित्सकको सुझाव छ ।
४० वर्ष उमेर कटेका महिलाहरुले अनिवार्य रुपमा स्तन जाँच गराउनुपर्छ । सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने, आफ्नो दैनिकीलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने, ताैल नियन्त्रणमा राख्ने, ३० वर्ष उमेर भित्र पहिलो सन्तान जन्माउने, स्तनपान गराउने, समय–समयमा स्वास्थ्य जाँच गराई राख्ने हो भने पनि स्तन क्यान्सरको रोकथाम गर्न सकिने चिकित्सकको सल्लाह छ ।
प्रकाशित मिति: 2019-03-10 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged स्तन क्यान्सर
विप्लब माओवादीप्रति कठोर हुन गृहमन्त्रीको निर्देशन
पाथिभरा क्षेत्रमा मदिरा बिक्री–वितरण बन्द
Tags: स्तन क्यान्सर